मलेसिया रोजगारी: शून्य लागतमा नेपालीहरु जान पाउलान? - बैदेशिक पोष्ट
मलेसिया रोजगारी: शून्य लागतमा नेपालीहरु जान पाउलान?
पुस ३०, २०७८ १२;२३ मध्यान्ह प्रकाशित
काठमाडौँ नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसियाको रोजगारीको बाटो खुला भएको छ। सि’ण्डिकेट प्रकरणका कारण २०७५ जेठ २ गतेदेखि नेपालीहरू मलेसिया जान पाएका थिएनन्
बन्द भएको १० महिनापछि २०७५ चैतदेखि मलेसिया रोजगारी खुला गरिएको थियो। त्यसलगत्तै महा’मारीका रूपमा फैलिएको को’भि’ड-१९ का कारण मलेसिया रोजगारीको बाटो पुन: रोकिएको थियो।
‘हामीले शून्य लागतको सम्झौता गरिसकेका छौं। तर कार्यान्वयनको आधिकारिक जानकारी आएको छैन। अब हामी यस विषयमा के गर्ने भनेर थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ घिमिरेले भने। २०७५ कात्तिक १२ गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम. कुलासेगरानबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जान पाउने गरी श्रम समझदारी पत्र(एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो।